कोरोनाको खोप लगाएकी पुटिनकी छोरीको शरीरमा देखियो यस्तो परिवर्तन, विश्व नै दंग ! – Sandesh Press
November 21, 2020 303
काठमाडौं । रुस को रोनाबि रुद्धको भ्याक्सिन आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्ने विश्वको पहिलो देश बन्न पुगेको छ। मंगलबार राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले देशमा को रोनाको पहिलो खोप बनेको घोषणा गरेका हुन। भ्याक्सिनको पहिलो डोज आफ्नी छोरीलाई दिइएको पुटिनले आफ्नो सम्बोधनमा बताएका थिए। उनकी छोरीलाई दुई खुराक दिइएको थियो। खोप दिइएपछि उनको शरीरमा तापमानको बदलाब रेकर्ड गरिएको थियो।
राष्ट्रपति पटिनका अनुसार पहिलो डोज दिँदा छोरीको शरीरको तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियस थियो। जब खोपको दोस्रो डोज दिइयो तापक्रम १ डिग्री घटेर ३७ डिग्रीमा सेल्सियस पुगेको थियो। तर, केही समय पछि फेरि तापक्रम बढ्यो र विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कियो। राष्ट्रपति पुटिनका मारिया र क्याट्रिना नामका दुई छोरी छन्। पुटिनले यी दुई मध्ये कुनलाई खोप दिइएको हो? भनेर स्पष्ट पारेका छैनन तर, सुई लगाएपछि छोरीले स्वस्थ महसुस गरिरहेको उनले बताएका छन्।
खोपपछि उनको शरिरमा ठूलो मात्रामा एन्टीबडी बनेको छ। राष्ट्रपति पुटिनले मंगलबारको आफ्नो सम्बोधनमा खोपले जाँचको धेरै चरण पार गरेको र सुरक्षित रहेको बताएका थिए। रुसले को रोनाको पहिलो खोपको नाम ‘स्पुतनिक-V’ राखेको छ। र यसको तस्विर पनि सार्वजनिक गरेको छ। रुसका स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुराश्कोका अनुसार विश्वका २० देशले आफ्नो देशमा बनेको पहिलो को रोना खोपका लागि करौडौं डोजको प्रि-अर्डर गरिसकेका छन्।
Prev१ घण्टा भित्रमा तपाइले सोचेको सबै काम बन्नेछ, यो कुरालाई बेवास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि कमेन्ट गरी शेयर गर्नुहोस्
Nextपति पत्नीले एकसाथ गर्नुपर्छ यी काम, फल आफै देख्नुहुनेछ !
आमहड्ताल अपडेट : प्रचण्ड नै निस्किए सडकमा अब के हुन्छ यस्तो भन्छन प्रचण्ड हेर्नुहोस
छाला सुख्खा हुने समस्या छ ? यसरी गर्नुहोस् ख्याल